Park Indawo Suite - I-Airbnb
Park Indawo Suite
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguMary
Indlu entsha enefenitshala, eli gumbi lingaphantsi linamagumbi okuhlala amakhulu, ikhitshi elinento yonke kunye neebhedi ezintathu. Enoba uhamba wedwa okanye uza nosapho, eli gumbi lithe cwaka, livulekile ibe linezinto zonke oza kuzidinga ukuze ikhaya lakho libe kude nekhaya.
Unomdla wokwazi ukuba yintoni eyenza iLillooet ibe yidolophu encinci? Hlala njengomntu wasekuhlaleni uze uzifumanele igumbi lethu elikwindawo ethe cwaka enepaki neendawo zokudlala ecaleni nje kwesitrato. I-Park Place Suite ikumgama wemizuzu eyi-5 xa uhamba ngemoto ukusuka kwidolophu, iindlela, ukunyuka intaba kunye noMlambo iFraser. Ukuba ufuna ukuzonwabisa ngakumbi kwi-Seton Lake, ukuloba, ukuzingela, igalufa, ukungcamla iwayini, unyango lwe-spa kunye nololiwe abakhweli bonke bakumgama wemizuzu eyi-15 ngemoto.
Emva kokuzingenela ngokufaka ikhowudi emnyango, uza kwamkelwa yindawo yokuhlala evulekileyo equka ikhitshi elinento yonke ngasekhohlo kwakho negumbi lokuhlala elifanelekileyo ngasekunene kwakho. Xa usiya kwigumbi lokulala uza kudlula kwigumbi lokuhlambela nomatshini wokuhlamba nowokomisa impahla opheleleyo ngaphambi kokuba ubeke amehlo kwibhedi enkulu.
58" HDTV ene-izitishi zeTV eziqhelekileyo
4.95 · Izimvo eziyi-241
Ungenza ntoni ukuze udlale igalufa Kwindawo Yegalufu Yegusha (imizuzu eyi-10 xa uqhuba) okanye mhlawumbi wonwabele usuku kwiSeton Lake yethu entle (imizuzu eyi-10 xa uqhuba)
Ekubeni mna nomyeni wam sihlala entla kwaye sidla ngokuba likhaya, nceda ungoyiki ukusazisa ukuba kukho ezinye izinto onokuzidinga. Sisoloko sikuvuyela ukuthetha neendwendwe zethu, kodwa ngokuqinisekileyo siza kuzinika indawo yazo.
Xa ilanga liphumile usenokusifumana nokuba sikhathalele iyadi. Siyathemba ukuba oku akuyi kukukhathaza, kodwa ukuba kunjalo nceda usazise. Sifuna ukuba wonwabele ukuhlala kwakho kangangoko kunokwenzeka.
Ekubeni mna nomyeni wam sihlala entla kwaye sidla ngokuba likhaya, nceda ungoyiki ukusazisa ukuba kukho ezinye izinto onokuzidinga. Sisoloko sikuvuyela ukuthetha neendwendwe zethu,…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Lillooet